गिता भट्टराईको मोतिरामले दर्शकको मन जित्दै
लोकप्रिय गायिका गिता भट्टराईको तिज गित मोतिराम बोलको गितले यतिबेला दर्शकको निकै साथ पाईरहेको छ । चर्चित लोक गायक बद्री पंगेनि र गिताको स्वर रहेको उक्त गितमा समसामयिक राजनितिक घटनाक्रमबाट समाजको एउटा सर्वमान्य पदमा पुगेकी नारी र उनको श्रीमानको दैनिकी र सपोर्टीड. बिषयलाई उठाईएको छ । गायक गायिकाको गाएकी कम्बीनेशन मिलेको हुनाले पनि गित अत्याधिक मिठो बनेको बनेको छ ।
समाज सेवामा हिडेकी श्रीमतीलाई मनै देखि सपोर्ट गर्ने एक पोजेटिभ थिंकीड. भएका श्रीमान र श्रीमतीको कुरा उठाईएको यो गितलाई एक नारायण भण्डारीले लेखेका हुन् भने संगित पनि उनकोनै रहेको छ । तिज नजिकीदै गर्दा स्टेज कार्यकमहरुमा पनि व्यस्त गितालाई यसपालीको तिजका लागी यो गितले निकै सपोर्ट गरीरहेको छ । स्थानिय चुनावले हरेक गाउँपालीका , तथा नगरपालीकामा जनताद्वारा मनोनित महिलाहरुको यथार्थ दैनिकीलाई गितमा उतार्न खोजिएको छ ।
गितको भिडियोमा गिता भट्टराई र पुरुषेत्तम भण्डारीको अभिनय रहेको छ । स्मृति तिमल्सिनाको निर्देशन रहेको उक्त गितको भिडियो पनि हेर्न लायकको बनेको छ ।